Uyenza njani iqela kuWhatsApp, uyihlele kwaye uyiqwalasele | I-Androidsis
Siyaqhubeka nezinye izifundo ezisisiseko kwabo baqala kwihlabathi le-Android; ngokuthe ngqo, kwi WhatsApp, esona sicelo sithandwayo sithunyelwa ngokukhawuleza kwi-Android, ekwafumaneka nakwezinye iiplatifomu, ezinje nge-iOS.
Ngeli xesha, Sichaza indlela yokudala iqela kwi-WhatsApp, uyihlele kwaye uyiqwalasele ukuze ukwazi ukunxibelelana nabahlobo bakho, usapho, abantu osebenza nabo okanye oqhelene nabo ukuze uhlale unolwazi. Ilula kakhulu kwaye kulula ukuyila. Makhe sibone ukuba njani!
Inkqubo yokwenza iqela kweyona app ikhutshelweyo yokuthumela imiyalezo kwangoko inezinto ezimbalwa amanyathelo alula kakhulu, ekuya kuba lula kakhulu ukuyenza.
1 Ulenza njani iqela kwi-WhatsApp
2 Hlela useto lweqela
3 Mema abantu ukuba bajoyine iqela usebenzisa ikhonkco
4 Shiya iqela kwaye ucime
Ulenza njani iqela kwi-WhatsApp
Kuqala kufuneka singenise isicelo.
Nje ukuba ungene kuyo, kwindawo yokuqala ebonakalayo, leyo yile registrationError, siyinika kwimenyu ebekwe kwikona ephezulu ngasekunene, eneendawo ezintathu ezilungelelaniswe nkqo kwaye ibekwe ecaleni kweinjini yokukhangela. Siza kuqaphela ukuba iinketho zemenyu zibonisiwe.
Emva koko sikhetha ukhetho lokuqala, oluthi Iqela elitsha. Kulapho siza kukunika khona ukuyila. Oku kuyavela kwi Ifowuni, ongumyalezo we logo obekwe kwikona esezantsi ngasekunene registrationError.
Ukongeza amalungu kwiqela elitsha esiza kulwenza, kuya kufuneka sibakhethe. Singakhetha phakathi kwento enye (1) kunye namakhulu amabini anamashumi amahlanu anesithandathu (256) abantu.
Nje ukuba amalungu eqela akhethwe, sicofa kwi logo eluhlaza kwikona esezantsi ekunene ukuqhubeka.
Emva koko kufuneka sabele ifoto okanye i-icon kwiqela (ngokuzithandela), kunye nesihloko okanye igama esilichaza ngalo. Umzekelo: «Uluntu lwe-Androidsis».
Emva koku, sigqiba ukuyila iqela ngokulinika kwifayile ye- logo khangela.
Nje ukuba inkqubo igqityiwe, iqela elitsha liya kuvela kuluhlu lwengxoxo phantsi kwegama esilibekele lona.
Hlela useto lweqela
Ukuba senza iqela, siya kuba ngabalawuli balo ngokuzenzekelayo. Oku kusivumela ukuba songeze kwaye sisuse nabani na esimfunayo. Yintoni egqithisile, ukuba admin Iqela lisivumela ukuba sihlele useto lwalo, lilungelo esinokuthi sabelane ngalo nabanye abalawuli, ukuba nje sinika itayitile kwenye okanye kwamanye amalungu.
Ukuba ngumlawuli, Sinokwenza ngokwezifiso ukuba ngubani onokutshintsha ulwazi lweqela, kananjalo ngubani onokuthumela imiyalezo. Ngale nto siza kuba neendlela ezimbini: Bonke abathathi-nxaxheba y Abalawuli kuphela. Sinokutshintsha inkcazo kunye nomfanekiso weqela. Sihlela konke oku ngokusebenzisa Ulwazi lweqela.
ukuba fikelela kwifayile ye- Ulwazi lweqelaKufuneka sikhethe iqela kwaye singene kwimenyu ehlayo, enxulunyaniswa namanqaku amathathu athe nkqo nkqo avela kwikona ephezulu ngasekunene. Singayifaka kwingxoxo yangaphakathi yeqela, kwimenyu enye kwaye senze imiyalelo efanayo, okanye ngokulula ngokukhetha igama leqela kwingxoxo yangaphakathi.
Kwelinye icala, ukuba sinqwenela thulisa iqela lezaziso, singayenza ngokukhetha ukhetho oluphendula kweli gama linye kwimenyu ehlayo yamanqaku amathathu athe nkqo kwincoko yangaphakathi efanayo. Kwangelo xesha, ngaphandle kwale, sakuba sikhethiwe, siklikha kwilogo yecornet sithule ukwenza isenzo esinye. Singathulisa izaziso iiyure ezisibhozo (8), iveki enye (1), okanye unyaka omnye (1).
Kwakhona singamisa iankile kuqala kuluhlu lweengxoxo kukhetho Iankile, enxulunyaniswa nepini kwaye ebonakala kukhetho olubekwe phezulu kwindawo yokuqala yenkqubo ukuba sikhetha iqela. Kufuneka iqatshelwe ukuba singakwenza oku ngeqela elinye okanye nangaphezulu, kunye nengxoxo.
Mema abantu ukuba bajoyine iqela usebenzisa ikhonkco
I-WhatsApp isivumela ukuba simeme abantu kwiqela ngokusebenzisa unxibelelwano. Siza kuyifumana le nto Ulwazi lweqela, nangona sinokuyifumana kuphela ukuba singabalawuli beqela, okanye ukuba, okanye abalawuli abadluli kubo. Ngale nto asizukubanabo bantu sifuna ukubamema kuluhlu lwethu loqhakamshelwano.
Shiya iqela kwaye ucime
Njengokuqiqa, Siza kuhlala sikhetha ukushiya iqela ukuba sifuna njalo, nangasiphi na isizathu. Siza kwenza oku ngokuya kwifayile ye- Ulwazi lweqela, apho siza kukunika khona Shiya iqela ukungabi sabakho kuyo. Kwangelo xesha, singayixela ukuba umxholo opapashwe kuyo awulunganga kwaye ngokungafanelekanga ngokungenisa kuyo Xela iqela.
Kucacile ewe salishiya iqelaAsizukukwazi ukuthumela imiyalezo kwaye asizokwazi ukubona imiyalezo emitsha ethunyelwa ngabanye abathathi-nxaxheba kuyo, kwaye ngekhe sikwazi ukumisela okanye ukwenza naliphi na inyathelo elinxulumene nokusebenza kwayo. Sinokubona kuphela imiyalezo ebishiyelweyo, kwaye njengokhetho lokugqibela, cima incoko kuyo.
Sikufundisa nawe indlela yokumakisha incoko njengoko ifundiwe; indlela yokubonisa isibindi, ukulinganisa, ukubetha okanye ukuhambisa amagama; kwaye indlela yokwazi ukuba ngubani othetha naye rhoqo kuWhatsApp.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Whatsapp » Uyenza njani iqela kuWhatsApp. (Hlela kwaye uyiqwalasele)